Date: 24 janvier 2018 - 13:31
za vhv manana anton'asa raikitra, ny vadiko miasa tena fa toy ny tsena rehetra dia indray² mandeha indray² tsy mandeha, dia nisy projet hokasaina hatao, raha hanao prêt bancaire anefa hiaraha-mahita ny intérêt alain'ny bank
nisy bandy nanadala ahy taloha t@ mbola kely, zao samy efa manambady zahay fa mbola iray tanana, izy mahalala tsara ny situation-nay, izy azo lazaina oe manana ny ampy, nisy fotoana tafaraka zahay dia niresaka momba ny fiainana sy ny tokantrano, izy mahafantatra ny vadiko fa tsy fantatry ny vadiko, noteneniko anazy ny momba ny projet-nay dia tsara be izany ozy ary afaka manampy anareo aho raha atao tsy fantatr'lay vadiko oe izy no manampy anay
dia eo indrindra ny problème-ko rizareo a, handray ilay vola ve hanaovana le projet-nay dia hanafina @ vadiko oe avy aiza ilay vola sa aleo hadaboka ny any aminy ?
afaka mody miteny ny vadiko aho hoe nanao prêt scolaire dia iny no amerenana tsikely² ilay vola nindramiko, efa no-proposer-ko moa izy hoe misy bijou zay aty amiko azoko omena azy dia refa tafaverina ny volany dia averiny amiko ny bijou-ko fa hoy izy hoe tsy mpampanjana-bola ono izy fa raha omenao azy ilay bijou dia raisiny fa raha hoe averina izany dia tsy tiany fa aleo andeha @ fifampitokisana fotsiny, fanampiana ono tiany hatao anay
dia vaka ny saiko handroso sa hihemotra ?
Par: Mpiandry ato
Date: 24 janvier 2018 - 15:30
Aza miteny intsony hoe Kristiana fa ndana aloha miverina mihanatra Didy-10,dia tsy mametrapetraka fanotaniana hoatr'izao intsony @ manaraka
Ny vaha olana dia mila manala devoly enao!manatona mpiandry
Date: 24 janvier 2018 - 16:50
oay kosa e! inona ty valitenin'olona tsy ampy fahendrena ty??? Fantatrareo kosa vé ny ny tantarany e! omeo conseil fa zay no tadiaviny eto , toy ny rehetra !!
Date: 24 janvier 2018 - 17:46
adalavé=enao mihintsy izao no mila homena conseil hoe vakio tsara ny soratny dia aza avela hanomboka relation malsaine izy @ fomba tsy mahitsy @ zay tsy tonga hatr@ olana ny tokan-tranny ,tonga dia toraka ranoman-gatsiaka hampifoha azy @ torimasony ny resaka
Par: avalomy tany
Date: 25 janvier 2018 - 09:17
projet >>> Vao ianao nitantara ny fiainan-tokatranonao tamin'io lehilahy io dia efa diso. Dia avy eo ianao manana fikasana haka vola ary afeninany vadinao. Dia avy eo ianao mi-propose hanome bijoux anao ho tehirizin'ny lehilahy vadinao. Mba alefaso lavitra ny saina ry vehivavy.
Raha manana olana lehibe ny tokatrano dia miresaka amin'ny vavolombelona na amin'ny olona hitokisana, ary resaka hifanarahan'ny mpivady ... Fa tsy hoe ianao miresaka mitokana amin'ny olona efa taratara taminao taloha, ary tsy atao fantatry ny vadinao. Mazava be izany : Mihazakazaka mankany amin'ny fahaverezana ianao, ary fantatrao tsara izany, fa ianao tsy te hifoha.
Raha vao manomboka amin'ny hoe tsy atao fantatry ny vadinao ny resaka, dia efa mitsaoka no tokony ataonao voalohany. Rehefa tsy vitanao izany dia miomana fa efa tsy lavitra ny fampirafesana.
Date: 25 janvier 2018 - 14:05
Lay teninao hoe "raha atao tsy fantatr'lay vadiko oe izy no manampy anay",jereo tsara fa efa mipetraka dieny ety ampiandohana ny condition,ary tadidio fa zavatra misy condition dia tsy maintsy hila tambiny na ho ela na ho haingana,ohatra fotsiny hoe ny bijou-nao raha atao antoka tsy mety aminy fa raha omena azy dia tsy maninona,zany hoe tena mipetrapetraka tsara zany ny velampandrika eto raha tsy misaina tsara ianao,ary tsy ho afabela nefa ianao @zany fa tsy maintsy hisy contre partie-ny io.
Ka ny tokony ataonao dia zao,raha tena vonona ny anampy anareo tokoa lay bandy,dia mifampiresaha nareo mivady aloha raha mety ny hamarotana lay bijou,dia lazao azy ny olona hividy,dia teneno lay bandy avy eo hoe vidio ary ty bijou ty hoe satria efa tsy mety aminao iany lay izy atao antoka dia ho hita eo,rehefa tsy mety moa izy dia mitady olokafa ndray nareo amarotana lay izy.
Date: 26 janvier 2018 - 10:36
misaotra anareo zay namaly
namanafotsn>> izy aloha dia tena lhl tsotra ka tsy dia atahorako oe ho tonga @ contre-partie e, de plus tsy afaka ny hifankahita matetika izany izahay satria samy manan-tokantrano, samy miasa ihany koa
izy niteny fa tsy te-ho fantatry ny vadiko oe izy no manampy anay satria fantany ny vadiko fa masiaka ka raha vao hoe lehilahy no hanome vola dia tsy maintsy raikitra ny gidra² dia izay no tsy tiany nefa fanampiana no tiany hatao fa tsy gidraka
avalomy tany>> 15 ans passés nanana mazda zahay de le vadiko no nitondra anazy saingy narary mafy le rafozan-dahiko dia tsy maintsy namidy nitsaboana anazy ny vola (fantatr'ilay namako io hoe nitondra mazda le vadiko dia nanontaniany za hoe fa nankaiza ny fiaranareo zay no nahatonga ny resakay fa tsy hoe za no nitantara ny fiainan-tokantranoko taminy), efa niteny moa aho hoe ilay mitondra mazda efa spécialités-n'ny vadiko fa mba omeo mazda iray ao aminareo alanay traite, dia azoko atao mihitsy zany fa sao dia manahirana @ vadinao ozy, dia izahay mivady ange no hiresaka aminao ho'aho e, sarotra be izany hoy izy fantatro tsara vadinao iny fa raha izy tsy hanaiky an'izany eo, dia izay no nahatonga ahy niteny hoe ary raha vola
Par: hi hi hi
Date: 26 janvier 2018 - 15:33
aza mba donenitra ohatry ny sôferana mazda ihany ry zalahy a
Date: 26 janvier 2018 - 16:01
Hay tena ianao no tompon-kevitra nangataka taminy fa tsy izy no nanolo-tanana mialoha ?
Na izany na tsy izany, fetsy ny lehilahy fa aza poizinina amin'izany ny tokatrano. Meteza hieritreritra fa aza dia mora jamban'ny resaka na dia vehivavy aza.
Jereo fa amin'izao, na dia niteny aza ianao fa ianareo mivady no hiresaka aminy, dia tsy ekeny fa hamboleny hantsana (secrets) lehibe eo anelanelanareo mivady. Dia mbola hainy ny mandresy lahatra anao fa ny vadinao no lehilahy ratsy mahatonga io secret io fa tsy izy. Dia io tokoa ianao fa ndeha hino ary hitady hevitra mba tsy hahafantaran'ny vadinao ilay izy.
Ny tokony ataonao, na manaiky ilay lehilahy na tsia, dia miresaka amin'ny vadinao hoe misy an'io lehilahy io izay efa nanadala anao taloha niresaka an'izao sy izao. Rehefa tsy mampandry saina ny vadinao dia miaraka mitady hevitra hafa ianareo mivady fa tsy ianao no miaraka mitady hevitra amin'ilay olona hafa.
Date: 07 février 2018 - 17:40
Io matetika dia hevitra diso tanteraka mintsy.
Ny mpivady dia olona roa miaraka eo @ fiainana.
Zany oe ianareo mivady no miara manapaka sy mandidy fa tsy ianao irery raha resaka toy izany.
Ianao iany dia efa namaly fa vaky loha ianao satria fantatrao fa tsy mety izany.
Na inona na inona projet ao antrano dia tokony hiara miresaka sy hiara mijery. Vadinao izy fa tsy anadahinao, na namanao, na zanakao... Raha tsy vitanao ny hiresaka aminy dia ajanony fa hamatotra anao ny lainga ataonao na ho ela na ho aingana
Par: oh ie
Date: 09 février 2018 - 20:39
Tsisy olona hanampy anao fotsiny @ zao andro sarotra izao fa misy zavatra ilainy aminao, ampandoaviny anao en nature io , dia ny tokantranonao ho rava moa ianao lasa andevon'ilay bandy ara-pananahana.
Date: 08 mars 2018 - 16:30
Raha ny fahitako ity resaka ity dia ianao mihitsy no olana fa tsy ny tsy fanananareo vola. Mitsiriritra io lehilahy io ianao satria manam-bola nono ny vadinao izy, dia mitady hevitra ianao iarahana aminy.
Raha tianao ny tokantranonao dia tokony hesorinao ao antsaina ny momba io lehilahy io dia mitadiava hévitra hafa.
Date: 09 mars 2018 - 16:31
olon mitady problem ianao raha tsy fantatriny vadinao ny projet dia tsy hamerimbola le olotianao taloha anaovany chantage ianao dia inona no ataonao aza miditra amin'ny kilaoty tery an tandremo aza hoentin'ny sentiment sao very ka hanenina eo
MIJOBOKA EO AN
Date: 11 mars 2018 - 06:43
Tsy mety v raha avy dia resahiny mialoha inona no mety handrasan'ny mpampondrana aminao raha raisina ny fanampiany?
D manontania tena izao Sao Enao mihintsy koa no mety hitarika azy amin'ny fakampanahy any aoriana.
Ra resaka madio ny azy, raha matotra koa ianao, tsy hitako ny olana. Zara aza misy an'izany.
Date: 20 mars 2018 - 13:42
Amiko tonga de avalony any izany Ra za manokana tsy mety ary tena zvt ratsy izany mpivady mifanafina zany Ary marina ny teniny etsy ambony oe enao vo nitantara ny projet anareo taminy de efa tsy mety Tkn ampalalainao ny vadinao daolo zany rht zany Fa eo d efa hita ny ho avy ny fanambadianareo ra vo tohizanao io